Indlu ene-sauna kwilali ye-cottage "Zayachya Gorka" - I-Airbnb
Indlu ene-sauna kwilali ye-cottage "Zayachya Gorka"
Выборгский район, Ленинградская область, Russia
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguТатьяна
Indlu ifumaneka kwindawo ecocekileyo ye-ecologically yesithili saseVyborgsky kwingingqi yaseLeningrad, kwidolophana ye-comfort-class cottage "Zayachya Gorka" enokhuseleko olujikelezayo. Kukho imithi emininzi kwintsimi yelali, ichibi, kumda welali kukho umlambo. I-Supermarket "iMagnet", iivenkile zokutya, iifestile - ukuhamba ngemizuzu eyi-10 ukusuka kwindlu.
I-cottage inayo yonke into oyifunayo kwiholide ekhululekile emaphandleni: amagumbi amathathu okulala, i-sofa enkulu, indawo yomlilo, i-barbecue, ikhitshi kunye nazo zonke izixhobo kunye nezixhobo, i-sauna, i-intanethi.
Indlu ilungele iholide yosapho okanye inkampani enobuhlobo. Emva kokutyelela i-sauna, unokuphumla kwi-terrace kwaye ujabulele umoya omtsha kunye nokuthula. Kubathandi be-kebab kukho i-barbecue.
Ulonwabo losapho lonke olukufutshane:
Agritourism complex "KONNAYA SLOBODA" (3 km),
Intendelezo yaseUspenskoe i-Optina Pustyn (iikhilomitha ezili-12),
Iklabhu ye-Equestrian kunye ne-mini-zoo "i-Goldenhorses" (iikhilomitha ezingama-20),
Ipaki yokuvusa "Wonderwake" (10 km),
Ipaki yentambo "iKing Kong Park" (iikhilomitha ezingama-36),
Iziko Ski "Korobitsyno" (50 km).
I-KP "i-Zayachya Gorka" ifumaneka kwindawo esezantsi ye-Karelian Isthmus, kwisithili saseVyborgsky kwingingqi yaseLeningrad. Umgama ukuya eSt. Petersburg - i-75 km, umgama weGulf of Finland - iikhilomitha ezingama-35 (ii-bays ezinamanxweme anesanti Okunevaya kunye neZheltaya) Zelenogorsk - i-35 km, amachibi amakhulu - imizuzu eyi-10 yokuqhuba. I-Supermarket "iMagnet", i-pharmacy, izitolo zokutya, iifestile - i-10-minute drive ukusuka endlwini.